စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ
ရွှေပေလွှာတွင် ကြော်ငြာများအခမဲ့ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် ဆက်သွယ်ရန် pitipaygi1@gmail.com
ရေဘေးအတွက် ပလန်လိုနေသော မြန်မာများ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာများသည် အလုပ်တော်တော်များများတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ ကြိုတင်စီမံမှု အလွန်နည်းကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအပါအ၀င် ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး လို ပြည်သူတစ် ရပ်လုံးအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ဆောင်ရမည့်နေရာမျိုးမှာ လုပ်ဆောင်ကြသူတွေများပါလျက် ပလန်တွေလိုနေ သောကြောင့် ထင်သလောက်ခရီမပေါက်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။
ယနေ့တွေ့ကြုံနေကြရတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သင့်သူများကို ကူညီကြတဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သားမှန်သမျှ ကိုယ်တတ်နိုင်ရာကို မလှူဖူးတဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့တွက် ကြည့်ရင် သန်းပေါင်းများစွာပါပဲ၊ သို့သော် လူသားသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ လှူဒါန်းမှုဟာ လူသားသိန်းဂဏန်း လောက်ထံ လူတန်းစေ့အောင် မကူညီနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ ရတဲ့နေရာက ပိုလျှံနေအောင်ရပြီး မရတဲ့နေရာက လုံးဝအရှင်းကိုမရဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒါဟာဘာကြောင့်လဲလို့ တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ယနေ့ကူညီရေးလုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းများဟာ လုံလောက်တဲ့ပလန်တွေမရှိကြလို့ပါပဲ။ ပလန်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုတည်းရဲ့ ပလန်ကို ဆိုလိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့သားအားလုံးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ပလန်တွေ ကိုပြောတာပါ။
ဥပမာ ရေဘေးသင့်တဲ့ကျေးရွာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ရေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖျင်းလူဦးရေဘယ် လောက်ရှိနိုင်လဲ ။ ဘယ်အဖွဲ့တွေက ဘယ်နေရာသွားသင့်ပြီး ဘာတွေလို အပ်သလဲဆိုတဲ့ နည်းစနစ်ကျတဲ့ ပလန် မျိုးကိုပြောတာပါ။ ဒီပလန်တွေက ဖြစ်မှ ရေးဆွဲရမဲ့ပလန်တွေ မဟုတ်ဘဲမဖြစ်ခင်က ရေးဆွဲသင့်တဲ့ ပလန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းအတွက် ပလန်တွေလိုပ်အပ်ပေမဲ့၊ ဒီနေရာမှာတော့ ရေဘေးနဲ့ပတ်သက် တဲ့ဖြစ်သင့်တာ လေးတင်ပြပါရစေ။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့အချိန်ထိ ကူညီသူမဲ့နေတဲ့ကျေး ရွာပေါင်းများစွာအတွက် ၀မ်းနည်းမိလို့တင်ပြတာပါ။
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 12:39 AM No comments: Links to this post
သမ္ဗာန်တင်ရွာအားကူည်ီရေးပစ္စည်းများ သွားပို့ရင်း သမ္ဗာန်ပေါ်တွင်ရေးသည်။
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 7:58 PM No comments: Links to this post
မကွေးတိုင်း၊ ကျောင်းတော်ရာ စခန်းမှ သမ္ဗာန်တင်ကျေးရွာဟာ ရွာပေါင်း၁၃ ရွာကျော်ဖြတ်စက်လှေဖြင့်ခုတ်မောင်းပြီးသွားရင် ၂နာရီနီးပါးစီးမှ ရောက်တာကြောင့် အတော်အသင့်ကူညီရေးသမားတွေမရောက်ကြပါဘူး။
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးကို စာပေချစ်သူများအဖွဲ့ စာပေနှင့်ပရဟိတ ကွန်ယက်မှ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခက်ခဲပေမယ့် ခက်ခဲရကျိုးနပ်ကြပါတယ်။
၈.၈.၂၀၁၅ ကျောင်းတော်ရာ ငါးကျွေးဆိပ်မှထွက်တယ်ဆိုရင်ပဲ လော်စပီကားများဖြင့် မေတ္တာသုတ်ပရိတ်တွေရွတ်ကြရင်း ရေလမ်းခရီးကိုစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
စက်လှေစီးနေစဉ်မပျင်းရလေအောင် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ကဗျာတွေကို ရေးခဲ့ကြရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သမ္ဗာန်တင်ရွာကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရွာသားများက လှေကိုယ်စီနဲ့လှိုက်လှဲပျူငှါစွာကြိုဆိုနေကြပါတယ်။
ရေတွေက ကျနေပြီဆိုပေမယ့် မေးစေ့ အထိနက်ပါသေးတယ်။
ရပ်ရွာအတွင်းမှာ အိမ်ခြေ ၁၂၀ ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပြီး လူဦးရေ ၆၀၀ခန့်ရှိကြောင်းလည်းသိခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်ရှိရွာမှာ ရှိသူက ၃၀၀ မျှပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်၃၀၀ က ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များနဲ့အတူ နီးစပ်ရာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကိုရောရှိနေကြပြီိး ရေကျမှပြန်လာကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။
သမ္ဗာန်တင်ကျေးရွာမှာ ရေးကြီးမှုကြောင့် လူအသေအပြောက်မရှိခဲ့သော်လည်း နွားခြောက်ကောင်ခန့် မျှောပါသေဆုံးသွားကြောင်းရွာခံများက ပြောပြပါတယ်။
ကျနော်တို့ရွာကို တိုက်ရိုက်လာတာဆိုလို့ နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်၊ ဆရာတို့ စာပေချစ်သူများအဖွဲ့နဲ့ ဒီရွာဇာတိ ရန်ကုန်ရောက်မိသားစု တစ်စုနဲ့အဖွဲ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့စာပေချစ်သူများအဖွဲ့ဟာ ရောက်ရောက်ခြင်းဆိုသလိုပဲ ပါလာသမျှသင်္ကန်းများနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းအချို့ကို သမ္ဗာန်တင်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အား ၀ါဆိုသင်္ကန်းအဖြစ်ဆက်ကပ် ငါးပါးသီလများဆောက်တည် ကြပါတယ်။
ရွာသူရွာသားများက ခက်ရာခဲစစ်ရေပေါ်မှာဖြစ်သလို ချက်ထားတဲ့ ထမင်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့်အဖွဲ့ကို ဧည့်ခံပါတယ်၊ စိတ်မကောင်းလို့ ကျွန်တော်ကတော့မစားခဲ့ပါဘူး၊ ဒီနေ့အတွက် မုန့်များကိုသာ စားနေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ရွာသူရွာသားများရဲ့လက်ထဲကို ရေသန့်ဗူး ကတ်များ တစ်အိမ် ၂ကတ်နှူံး ကိုယ်တိုင်ပေးဝေခဲ့ကြပြီး အခြားသော ဆန် ဆီ ဆေး ဆား ဓား ပေါက်ပြား
ဂေါ်ရှိတဲ့ အရေအတွက်များစွာသော ပစ္စည်းများကို ရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်းများထံအပ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ရွာကလူတွေအချိုးကျ ဝေပေးနေတာကို ကျွန်တော်တို့အပြန် ရွာဝင်ပေါက်မှ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ပစ္စည်းအားလုံးအချိုးကျ တစ်အိမ်ဝင်ထွက်လှူချက်ပေမယ့်၊ စက်လှေကြီးက ရွာထဲဝင်မရတာကတစ်ကြောင်း အချိန်ကိုငဲ့ညှာရတာက တစ်ကြောင်းမို့ လွဲပေးခဲ့ရတာပါ။ လွှဲပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အခြားသော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာမျိုလို ပေါပေါလောလော နေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ရပ်မိရပ်ဖနဲ့ ရွာသူရွာသားများ ရှေ့မှာပေးခဲ့ကြတာပါ။ ရွာရှိသူနာပြုမဆရာမကိုလည်း အိင်္ဂလိပ်ဆေးဝါး တွေအကြောင်း ရှင်းပြပြီးလွဲအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးလွဲအပ်ပြီးတဲ့နောက် ဆရာပေါ်ထွန်း (ကျောက်မီး) ဆရာပီတိ(ပေကြီး) ၊ ဆရာဇွဲမာန်(အင်းဝ) ဆရာလင်းခန့်တို့က ရေဘေးသင့်ပြည်သူ များအတွက်ရေးဖွဲ့ထားသော ကဗျာများကို ရွာသူရွာသားအပေါင်းအား ရွတ်ဆိုပြခဲ့ကြရာမှာ
ကဗျာများရွတ်ပြီးတာနဲ့ ရွာသူရွာသားများကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး မေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်ခါ စက်လှေ သမ္ဗာန်လေးကိုစီးလို့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ခု စက်လှေပေါ်ကနေ ဒီပို့စ်လေးရေးတင်လိုက်တာပါ။
၈.၈.၂၀၁၅ ညနေ ၅း၃၅
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 7:57 PM No comments: Links to this post
လူတွေရဲ့ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဘယ်အချိန်မှာပြုသင့်သလဲဆိုတာကို ညီမလေးအတွက်ပြောပြပေးချင်တယ်။
အများအားဖြင့် ခုခေတ် မိန်းကလေးတော်တော်များများက အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြု လာကြတယ်များတယ်ညီမလေး။ ဒီလိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတာဟာ ဘ၀ရဲ့
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 3:16 AM No comments: Links to this post
ဒိုင်း ဒိုင် ဒိုင်း ဒိုင်း ဒိုင်း ဒိုင်း
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 3:13 AM No comments: Links to this post
၁၉ ဇူလိုင် ကုသိုလ်လှိုင်
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 3:11 AM No comments: Links to this post
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 9:11 PM No comments: Links to this post
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ချစ်ညီမလေးသို့ (အနိုင်ရမဲ့ အရှုံး)
၂၀၁၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ဟာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ သမိုင်းဝင်နေ့ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာနေ့လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ နေ့ကထွက်တဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များရဲ့ အောင်ဂေဇက်ဟာ ကျရှုံးခန်းတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားလို့ပါပဲ။ တစ်နည်း အားဖြင့်ဆိုရင် မျက်ရည်စမ်းများကို တည်ဆောက်ထားလို့ပေါ့။
၂၀၁၄ရဲ့ အောင်ဂေဇက်ဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားတယ်။ အဲဒီကျဆင်းသွားတဲ့ဂေဇက်စာရင်းမှာ ကိုယ့်ညီမလေးပါ ပါလာတော့ ကိုယ်လည်း များစွာ ၀မ်းနည်းမိတယ်ညီမလေး။ စာမေးပွဲကျလို့
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 9:54 PM No comments: Links to this post
မူလ တောင် သူ ၁၈ ဦး တပြိုင် တည်း အမိန့်ချ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင် ကန့်ဘလူ
မြို့နယ် ဌက်ပျောတိုင်းအုပ်စု/ရွာ ဒေသတ၀ိုက်
တပ်သိမ်းယာမြေ ရရှိရေး ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်ကြိုး
ပမ်းခဲ့ကြချိန် သီးစားစိုက် တောင် သူများက သီး
နှံဖျက်စီးမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုကြရာ တရားစွဲခံ တောင်
17.7.2014 နေ့ ။ နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနှစ်
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 7:29 AM No comments: Links to this post
18.7.2014 အာဇာနည်နေ့အကြို ကန့်ဘလူမြို့နယ်အမှောင်ကျခြင်း
18.7.2014 ဒီနေ့ဟာ အာဇာနည်အကြိုနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်အတွင်းက ပေကြီး၊ ခအုံးတာ၊ ဘုတ်ကုန်း၊ ငှက်ပျောတိုင်း ထောက်ရှာအိုင်က တောင်သူ သူရဲကောင်းများလည်း ဒီနေ့ အာဇာနည် နေ့ အကြိုအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံလိုက်ရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ 1999ခုနှစ်က သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ ၄င်းကျေးရွာတောင် သူများ ဖိုးဖွားမိဘများလက်ထက်ကတည်းကလုပ်ဆောင်လာသောလယ်ယာမြေ များကို စစ်တပ်မှ
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) at 7:27 AM No comments: Links to this post
>;နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေ
သာသနာထွန်းကားရာဆိုဒ်များ သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်းကွန်းဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် သီတဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်ရိပ်သာ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဓ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ အရှင်ဇဝန-၁ အရှင်ဇဝန-၂ ဆရာတော်ဦးဝိဇယ ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ဓမ္မရံသီ ဓမ္မဒါန ဓမ္မပေါင်းချုပ် E-Dhamma Burmese Classic တရားများ နိဗ္ဗာန်န တရားတော်များ-၁ တရားတော်များ-၂ ဓမ္မအေးရိပ် သီရိမင်္ဂလာ ဘ၀နေ့သစ်များ သီတဂူဦးဇင်းလေး ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၁ ဆရာတော်ဦးလောကနာထ-၂ ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ဓမ္မသုခ ဓမ္မရနံ့ သန့်-တည်-ပွား ဆရာဦးမြင့်လွင် အဖြူရောင်မေတ္တာ-၁ အဖြူရောင်မေတ္တာ-၂ ဓမ္မမေတ္တာ ဝိမုတ္တိသုခ ဝိမုတ္တိရသ မေတ္တာပေတော ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ကိုထွန်းထွန်းလှိုင် အောင်မြေ သီတဂူဓမ္မဝိဟာရ ဓမ္မရေစင် ဓမ္မရသ ကောက်တေး-သိင်္ခ ပါရမီ အလင်းစေတမာန် ရွက်ဝါ အေးငြိမ်းပျော်ရွင် သစ္စာအလင်း အလင်းများရှိရာသို့ A light of Dhamma အလင်းရောင် ဘားမားမောင် အလှတရား ကိုမင်းဝေ သုခရိပ် ရွှေကြာ တရားတော် ဝိုင်အမ်ဘီအေအလှူဒါန ဓမ္မရိပ် သစ္စာတရား မြတ်ဗုဒ္ဓ ထေရဝါဒသာသနာ မနက်ဖြန် ဥပသကာ အရှင်ကုမာရ ဓမ္မပဒ ဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများ ဓမ္မဟေဝန် ရည်ရွယ်ရာ အပြစ်ကင်းသောနေရာ အနတ္တလက္ခဏ ဦးကောဝိဒ ဆရာလေးဒီပင်္ကရာ လောကချမ်းသာ ဓမ္မဆုံချက် တောင်ပေါ်သား အရှင်ကုသလသာမ စကြာဝဠာ ဘာဝနာဗလဖိုရမ် ဒဿနခရီးစဉ် ကိုငယ်
ပန်းချီပညာလေ့လာနိုင်ရန် painting.about simplypainting newmuseum the-gallwry-of-china .louvre moma thavibu insight-gallery acdmedia culture artseoul kodakgallery
စာကြည့်တိုက်များ မြန်မာအီးဘွခ် မြန်မာရခိုင်များ ရွှေစကား နေ့သစ်စာအုပ်စင် အဖြူရောင်မေတ္တာ အံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင် အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင် ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ် စာပေရိပ် စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက် ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင် Myanmar Ebook Archive Myanmar Ebook Golden Myanmar Dhamma Web Books Dhamma Download Myanmar Dhamma Download English Burmese Classic Buddha Net Book Hive
နည်းပညာဆိုဒ်များသို့ စေတန်ဂေါ့ သံလုံငယ် ညီလင်းဆက် ညီနေမင်း စံပီး မောင်ပညာ မောင်စေတနာ ကိုThinker ကိုရန်အောင် ကိုမင်းကျော် ကိုကျော်စွာငြိမ်း ကိုဇော်357 ကို‌ဇော်(ဒဂုံ) ကိုချစ်ဦး ကိုကျော်ကျော်ဦး စပ်မိစပ်ရာ စိုင်းနက္ခတ် ဖိုးသား တူလေး ပုဂံသားမောင်ဘကျော် ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာ မုန်တိုင်း ရာမညဖိုးလပြည့် အလင်းရောင် အညာသား ဟိုက်ဝေး အိုင်တီခရီးသည် အိုင်တီမန်း နည်းပညာမှတ်တမ်း မာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများ မနောသား မနောဖြူလေး မိုးမြင့်ရှိန်း မိုးထက်မြင့် လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာ မလေးရှားရောက်မြန်မာ ဟင်းလင်းပြင် ကျနော့မှတ်စုစာအုပ် ကနက်သီရီသားလေး ညီညီ(လောကမီးအိမ်) ဧရာညီနောင် အီလက်ထရောနစ် ဘုရင့်နောင် ဝိုင်း Burma IT Share Co2'sNote STAMEDIA Ogre KP3 Family Kogee Lay WWM MMBloggerHelpdesk Myanmar Download MyanmarITMen My Softwares ThememagicMonGTC Troj4n Engineer4Myanmar
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဆိုင်များ လေ့လာရန် မြန်မာ မြန်မာသတင်း မြန်မာဂျီနီဗာ အမြင်သစ် Planet Myanmar ရန်ကုန်စီးတီး ရန်ကုန်ဂလိုဘယ် Forverspace
ရေးသားထားသော စာအုပ် ရွှေပေစာအုပ်တိုက်မှ
Powered by >> AL
Myanmar Calendar http://myanmar-calendar.cool-emerald.com/
လူငယ်မောင်မယ်များနှင့်သူ့သားသမီးလွန်ကျူးခြင်း လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေ…ဒီတစ်ခါတော့ ဘ၀မှာ အလွန်အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှတဲ့ ကာမဂုဏ်အ...
ပျို့ဂုဏ်ရည် ညီမလေးရေ…. ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ညီမလေးက အပျိုအရွယ်ဖြစ်နေတာမို့ အပျိုစင်ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားဖိုက အကြောင်း...
``အပျိုစင်´´ လှပတဲ့ပန်းတစ်ပွင့် ပိုးကိုက်သည့်အဖြစ် ကိုယ်တွင်းနှောက်တဲ့မာနတ်ဆိုး ကိလေသာနဲ့ထိုးဆွ တယုတယပန်းလေးတွေ
ဆီမီးရောင်ဖြာ သီတင်းကျွတ်ချိန်ခါ ၁၂လရာသီပွဲစုံညီ `` သင်္ကြန်တန်ခူး၊နှစ်ဦးညောင်ရေ၊စာပလွေခင်း၊ပဉ္စင်းတော်ခံ၊ စာရေးတံနှင့်၊ မြစ်ယံပ...
ခွေးလှေးယားဇီးဖြူသီးနဲ့တားမယ် ပီတိ(ပေကြီး) ခွေးလှေးယားသီးဆိုတာနဲ့ ...
ညီမလေးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ညီမလေးရေ… ဘာလိုလိုနဲ့ညီမလေးရဲ့ ( )ပြည့်မွေးနေ့တောင် ရောက်လာပြီနော်… မွေးနေ့မှာဘာလက်ဆောင်ပေးမှာလဲလို...
ဘ၀လက်ကျန် ညီမလေးရေ… မွေးနေ့မှာတည်ကြည်ရင့်ကျက် အေးချမ်းပျော်ရွှင်သော ဘာသာသနာ အလေးထား သောမြန်မာအမျိုးသမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။ ဘ၀အတွက...
ညီမလေးရေ… ဒီတစ်ခါကိုပြောချင်တာကတော့ ညီမလေးတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တကယ် ညီမလေး တို့ကံကောင်းတယ်။ ဘ...
တန်ဆောင်မုန်းလမြတ် သိမှတ်ဖွယ်ရာ(၁) ကထိန်ဆင်နွှဲရာသီပွဲ မြောက်လေငယ် သွင်းပါလို့၊ မြူနှင်းငယ်စိုစို၊ မြင်တိုင်းငယ်ပျိုသည်၊ ရွှေကျီးညိုတာရ...
မင်္ဂလာပါရှင်.... ယခုတစ်ပါတ် အင်တာဗျူး အစီအစဉ်လေး အတွက် မမဆွေးနွေးမေးမြန်းသူကတော့ အလင်းကမ္ဘာ နှစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ( ဟာသ-ကဗျာ-ဆောင်းပါ...
Blog Archive July (1) August (4) October (6) November (6) December (4) January (8) February (7) March (1) April (4) May (5) June (2) September (1) October (3) November (1) January (16) February (4) March (1) April (8) May (3) June (5) July (6) November (1) December (1) July (3) August (3)
ဧရာဝတီ » ဧရာဝတီ
၁၄.၁၀.၂၀၁၂. Awesome Inc. theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.